ရွှေနိုင်ငံ: သင် မသိသေးတဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ထူခြားတဲ့ အကြောင်း ၁၀ ချက်
ကျနော်လက်ရှိ နေထိုင်နေတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံဆိုတာ ၁၉၆၅ခုနှစ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံကနေခွဲထွက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်းနိုင် ငံ ပိစိလေးပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူက First World Country လို့ခေါ်တဲ့ အလွန်အမင်း ချမ်းသာတဲ့ ကမ္ဘာ့ ပထမ တန်းစား နိုင်ငံထဲမှာပါတယ်။ ဒါကတော့ လူတိုင်းလိုလို သိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းလိုလို မသိသေးတဲ့ စင်ကာ ပူနိုင်ငံရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို ဗဟုသုတ အလို့ငှာ အပျင်းပြေစေကြောင်း အလို့ငှာ အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
၂. မိုနာကို နိုင်ငံလေးပြီးရင် စင်ကာပူနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒုတိယ လူနေထူ ထပ်ဆုံး နိုင်ငံ ပါတဲ့။ နိုင်ငံ ကကျဉ်း လူနေတာကများတော့ ဟုတ်တာပေါ့။ မြန်မာတွေကလည်း ဒီအထဲမှာ အားဖြည့်ထားတယ်
၃. စင်ကာပူနိုင်ရဲ့ ရုံးသုံးစာနဲ့ စကားဟာ အဂ်လိပ်စာနဲ့ စကား ဖြစ်ပေမယ့် "Majulah Singapura" ဆိုတဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံတော် သီချင်းကတော့ 'မလေး' လို စပ်ဆိုထားပါတယ်။ သီချင်းခေါင်းစဉ် နာမည်ကတော့ "Onward Singapore" ပါတဲ့။ဒီသီချင်းကို သီဆိုတဲ့အခါ 'မလေး' လိုပဲ သီဆိုရမယ်လို့ ဥပဒေနဲ့ကို သတ်မှတ် ထားပါတယ်။
၄. "The Merlion" လို့ခေါ်တဲ့ ခြင်္သေ့တစ်ပိုင်း၊ငါးတစ်ပိုင်းအရုပ်ဟာစင်ကာပူနိုင်ငံသင်္ကေတအ ရု ပ်ဖြစ်ပြီး၊ ခြင်္သေ့အရုပ်က စင်ကာပူကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ မင်းသားလေးက ဒီကျွန်းမှာ ခြင်္သေ့နဲ့တူတဲ့ သတ္တ ၀ါတွေ တွေ့ရှိခဲ့တာကို အစွဲပြုပုံဖော်ပြီးတော့၊ ငါး ကိုတာ့ စင်ကာပူနိုင်ငံ စဦးကာလဟာ တံငါ ရွာလေး ဖြစ်ခဲ့ တာကို အစွဲပြုပြီး ပေါင်းစပ်ပုံဖော်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စင်ကာပူက အပန်းဖြေ စခန်း 'ဆန်တိုစာ' (Sentosa) ကို သွားရောက်လည်ပတ်ရင်တော့ ဒီပုံပြင်လေးကို ကြည့်ရမှာပါ။
၇. Suntec City လို့ ခေါ်တဲ့ တာဝါအဆောက်အဦး ငါးခုဟာ စင်ကာပူကို လာဘ်လာဘ ရွှင်စေကြောင်း ယတြာကောင်းချေ လို့ ဖုန်းရွှေ ပညာနဲ့ လက်ဖ၀ါး ပုံစံ ဆောက်လို့ထားပါတယ်။ တာဝါ ငါးခုကို လက်ချောင်း ငါချောင်း သဏ္ဍန် အနိမ့်အမြင့်အတိုင်း တည်ဆောက်ထားပြီး အလယ်မှတော့ လက်ဖ၀ါး သဏ္ဍန် ရေ ပန်းကြီး တစ်ခု ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ အဲဒီ ရေပန်း တစ်ခုတည်းတင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆သန်း ကုန်ကျ ခံကာ ၁၉၉၇ခုနှစ်မှာ တည်ဆောက်ထားပါတဲ့။
၈. စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်းမှာ ပီကေ (Chewing Gum) ကိုစားသုံးခြင်း၊သယ်ဆောင်ခြင်း၊လက်ဝယ် ထား ရှိခြင်းပြု လျှင် ကြိမ်ဒဏ်၊ ထောင်ဒဏ် စသည်ဖြင့် ကြီးလေးသော ပြစ်ဒဏ်များ ခံရနိုင်သည်။
၉. ကမ္ဘာပေါ်မှာ မီလျံနာသူဌေးအများဆုံး နိုင်ငံကို ပြပါဆိုရင်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုပဲ ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် က စားရင်းဇယားများအရ စင်ကာပူနိုင်ငံသား အယောက် ၁၀၀မှာ ၁၇ယောက်ဟာ မီလျံနာ သူဌေးများ ဖြစ်ပါတယ်။